Lockheed P-3C Orion FSX & P3D mhando 3.31
Downloads 27 359
Munyori: Team FS KBT http://www.flightinfo.jp/FS_KBT/
Auto-installer akagadziridzwa kuti shanduro 10. Updated musi 05 / 07 / 2016: Version 3.31, DirectX10 inoenderana P3D kugarisana naye VC
Click panokuwana FS2004 chete enderana vesion.
Tiri kufara kuzozivisa P-3C nedzeOrinoni, kunozivikanwa uto ndege, modeled neDare FS KBT chikwata. The Lockheed P-3 Orion ari nepagungwa patrol ndege uchishanda mana-helices munyika. The P-3 Orion ari muchiuto rinobva kwoutsinye ndege Lockheed L-188 Electra yakasiyiwa chirongwa. (Mabviro: Wikipedia)
Version pachibarirwo kunoenderana FSX / SP1 / SP2 uye P3D v1 & 2 asi zvakadaro haienderani DirectX 10.
Exterior uye kupenda muenzaniso uyu wakasikwa zvakadzama kupfuura (V29) yapfuura basa. Kunyanya, mukuru bapiro ukama (kurova-rova uye injini nasser, etc.) ndiyo mazano matsva. mhando dzakawanda P-3C zvakagadzirwa zvakafanana chinofananidzira P-3C waiva panguva iitike ikozvino. Zviri pfumbamwe mhando vari vanosvika.
Murovedzi wedzera-mberi zvizere 3D rakapotsa Cockpit uye tsika mitinhimira. Modeling yepamusoro, kuwana textures zhinji akafanana NAVY uye Canadian Air Force. Ndege womuenzaniso zvikuru chaizvoizvo. Uyezve, ndege iyi izere isingatarisirwi, akadai mabhomba nezvimwe chaiwo mabasa. It ane zvose ane payware, asi zviri freeware.
Lockheed P-3C Orion FSX & P3D mhando 3.31 Download
Downloads: 24 363
Downloads: 23 402